Iddoo qaaqa amaloota dirree itti gulaalu dandeessu siif bana. Dirree fuula durraa cuqaasitii kana booda ajaja kana fili. Qaaqa kan keessaatti, qabduu xiyya dirree kan duraa yk itti aanuu akka siif siqsu fayyadaamu ni dandeesa.
Dirree galmee kee irraa bantee gulaaluuf dirree irra lama cuqaasuu ni dandeesa.
Gulaali - Dirreewwan filadhu
Yoo walqabsiisaa DDE galmee kee keessaa filattee, kana boodaa, qaaqa Gulaali - Dirreewwan, kana Walqabsiisaa Gulaali bana.
Yoo dirree Akaakuu kan "Ergaa" dura erga cuqaastee booda Gulaali - Dirreewwan filattee, qaaqa Deetaa fayyadammaa kana bana.
Akaakuu dirree atti gulaaluutuu tarreesaa.
Miseensi qaaqa kanani gadii kan mul'ataan yammuu Akaakuu dirree filataamee wal gitaan qofa.
Dirree filaatameen tarreessa, fakkeenyaaf, "fixed". Yoo barbaadee, Akaakuu dirree filataameef dirqala kabiroo cuqaasu ni dandeesssa.
Qabeentoota dirreettif dhangii fili.Deetaaf, sa'aatii, akasuumas hiika fayyadamaa dirree, tarree keessa "Dhangii dabalataa" cuqaasuu ni dandeessa , isa booda dhangii addaa fili. Dhangiin jiruu Akaakuu dirree atti gulaaluu irratti hunha'aa.
Akaakuu dirree filataameef iddoodaa agarsiisa, fakkeenyaaf, "Fuula Itti aanuu ," " Lakkoofsas Fuula" yk "Fuula Duraanii". Gatii iddoodaa haaraa kan lakkoofsa fuula agarsiisaamee irratti ida'amuu saaguu ni dandeessa.
Lakkoofsa fuulaa mul'atuu osoo hintaanee, lakkoofsa fuulaa isa dhugaa jijjiiruu yoo barbaade, gatii Iddoodaa hinfayyadamiin. Lakkoofsoota fuulaa jijjiiruu yoo barbaade, qajeelfama Lakkoofsa Fuulaa kana duubisi.
Hiika gatiilee fi sadarkaa toorii "Boqannaa" Akaakuu dirreef jijjiiri.
Jijjiiramaa maqaa dirree agarsiisaa. Yoo barbaadee, maqaa haaraa galchuu ni dandeessa.
Jijjiiramaa gatii dirree ammaa agarsiisaa. Yoo barbaadee, gatii haaraa galchuu ni dandeessa.
Haala akka dirreen kaka'uuf ta'uu qabu agarsiisa.yoo barbaade, haalahaaraa saaguu ni dandeessa.
Haalii dirree ta'uus ta'uu batuus irratti hunda'ee qabeentoota dirree agarsiisame jijjiiri.
Galmee keessaa dirree filatame yeroo cuqaastu maakroo isa dammaqu bakka ati irraa filachuu dandeessu, Filataa Maakroo bana. Qabduun kun dirree dalagaa "Maakroo raawwadhu" qofaaf jiraata.
Dirree filataameef barruu wabii saaga yk ifteessa.
Maqaa maakroo, dirree filatame ramadame agarsiisa.
Iddooqa barruu kan dirree filataamee agarsiisa.
Barruu haalatti walqabate agarsiisa.
Foormulaa dirree foormulaa agarsiisa.
Uunka dirree filataamee kan kuusadeetaa irratti galma'ee saaguu barbaaddu fili. Gabatee yk gaafataa kan dirree filaatamee agarsisuu akasumaa jijjiiru ni dandeesssa.
Haali ifta'ee Akaakuu dirree iddoo gahee kan "Kuusaa kami'u" Kuusadeetaa lakkoofsa Kuusaaf agarsiisa.
Gara dirree duraanii galmee keessaa Akaakuun walfakkataanitti utaala. Qabduun kun kan ka'uu danda'uu, yammuu galmeen dirree akkaakuu tokko ol ofkeessaa qabatee dha.
Gara dirree itti aanuu galmee keessaa Akaakuun walfakkataanitti utaala. qabduun kun kan ka'uu yoo galmeen dirree Akaakuun wal fakakataan tokkoo ol of keessa qabaate qofa.
Dirree Itti Aanuu
Title is: Dirree Gulaali